Maxaa lagu heshiiyey kulankii u dhexeeyey Dowlada Federaalka iyo Puntland?
GAROWE- Kulan saacado ka hor u soo dhamaadey golayaasha Wasiirada dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayaa wararku sheegayaan in lagu heshiiyey iyadoo qodobo hordhac ah oo caadeynaya xiriirka soo baxeen.
Kulamo hordhac ah oo saaka dhexmarey RW Khayre, Madaxweyne Gaas oo dhinac ah iyo guddi ka kooban labada gole ayaa waxaa lagu go’aansadey in galabta la isugu yimaado shir guud kaas oo ka dhacey xarunta Wasaarda maaliyada Puntland ku leedahay Garoowe.
Wararka warsidaha Garowe Online kasoo garaya kulankaas ayaa sheegaya in habeenka caawa casho sharaf loo sameyn doono dhamaan wafdiga Ra’isal wasaraha Soomaaliya halka berri oo Jimce ah Qado wada yeelan doonaan labada dhinac.
Dhinaca kale kulankaan ayaa waxaa kasoo baxay in habeen dambe ay dhaceyso xaflada 1 August oo baaqatey habeenkii xalay Khilaafkii jirey owgiis.
Ra’isal wasaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in ka qayb gali doono xafladaas iyadoo la qorsheynayo in wafdiga Wasiirrka Kowaad maaalinta Sabtida ka ambabaxaan Garowe.
Khilaafka soo kala dhexgaley labada dhinac ayaa yimid kadib markii Wasiirka Kowaad ka cududaartey maalin ka hor inuu ka qayb galo munaasabad Dhagax dhig ah oo loo sameynayey Dakad la sheegey in laga dhisayo Garacad oo ka tirsan gobolka Mudug.
Warsaxafadeed kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland.
Madaxweynaha Dowladda Puntland kulankan uu laqaatay labada Gole ee Dowladda Puntland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Madaxweyne ku xigenka Dowladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, Ra'iisul-wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane. Xasan Cali Khayre iyo Saraakiil katirsan Madaxtooyada Dowladda Puntland.
Sidoo kale waxyaabahii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii maanta ayaa waxaa aad loo gorfeeyey saam qaybsiga khayraadka dabiiciga ah iyo sidii si siman loogu qaybin lahaa deeqaha beesha caalamku ugu deeqdo Soomaaliya, iyo weliba sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha, islamar'ahaantaana loo taabagelin lahaa dismaha dekedo cusub oo dhaqaalaha Puntland iyo Soomaaliyaba kor usoo qaada.
Warkaan waxaa dib wax loogu darey markale si aan ula socodsiino akhristayaasha wararka soo kordhay
Barnaamijka ay soo bandhigtay dowladda ee arrimaha gargaarka ayaa lagu saleeyay qabiil.